सम्बन्धविच्छेदको डरलाग्दो तथ्यांक : विहेको तीन महिनामै डिभोर्स ! – Yug Aahwan Daily
Monday 27th September 2021/
विवाह गर्ने विवादमा अस्मिताको हत्या
इपिएल । विराटनगरलाई २ विकेटले हराउँदै चितवनको विजयी सुरूवात
पहिलोपटक कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता भयो स्गै। रसरकारी विधेयक
ओलीको प्रतिवेदनमा भुसालको तीन बुँदे फरक मत
कैलालीको नवजीवन अस्पतालमा एक सुत्केरीको मृत्यु
चिनियाँ चासोबीच बाइडेनले आयोजना गरे इन्डो प्यासिफिक नेताबीच बैठक
देशभर ८३४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ९ जनाको ज्यान गयो
उपभोक्तालाई सजिलो पार्ने निर्णय सर्वोच्चको आदेशले रोकियो । सचिव श्रेष्ठ
सम्बन्धविच्छेदको डरलाग्दो तथ्यांक : विहेको तीन महिनामै डिभोर्स !
युग संवाददाता । १२ माघ २०७६, आईतवार १७:५२ मा प्रकाशित
474 पटक हेरिएको
सुर्खेत : विहेपछिको सम्बन्ध प्रेमिल र सुखमय होस् भन्ने चाहना हरेक जोडीको हुन्छ । अझ प्रेम विवाह गरेका जोडीले विहे पछिको सम्बन्धलाई रंगिन् बनाउने कसम नै खाएका हुन्छन् । त्यसकारण पनि विवाहित जोडी र उनीहरुका आफन्तका लागि सम्बन्धविच्छेद अर्थात् (डिभोर्स) अप्रीय घटना हो ।
तर पछिल्लो समय सम्बन्धविच्छेदका घटनाहरु बढेका छन् । अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका मद्दाको चाङ लाग्न थालेको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी भएपछि सुर्खेतमा जनघनत्व बढेको छ । जनघनत्वसँगै हतारमा विहे गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने जोडीको संख्या पनि बढ्दो छ । विशेषगरी प्रेम विवाह गरेका जोडीले नै डिभोर्स माग्दै अदालतमा धाउनेक्रम बढेको पाइएको हो ।
सम्बन्धविच्छेद बढेपछि अधिकांश परिवार टुक्रिन थालेका छन् पनि उनीहरुका बालबालिका अलपत्र परिरहेका छन् । यसले अपराध पनि बढाएको प्रहरीको भनाइ छ । जिल्ला अदालत सुर्खेतमा डिभोर्स माग्दै जाने पुरुषहरुको संख्या पनि बढेको पाइएको छ । अदालतका अनुसार विहे गरेको तीन महिना वित्न नपाउँदै जोडीले डिभोर्स गर्ने गरेका छन् । वर्षौंसम्म प्रेममा रहने र विहे गरेको तीन महिनामै डिभोर्सका लागि अदालतमा आउने गरेको जिल्ला अदालत सुर्खेतका न्यायाधिश डा.राजेन्द्रकुमार आचार्यले बताए ।
उनले भने,‘अदालतमा दर्ता भएका सम्बन्धविच्छेदका मुद्दाको तथ्याकं डरलाग्दो छ । कतिपय घटनायस्ता पनि छन्, विहेको तीन महिनामै पनि डिभोर्सका लागि अदालतमा आएका घटना छन् ।’ उनका अनुसार प्रेम विवाह गरेका जोडीले बढी सम्बन्धविच्छेद गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । विगतमा अदालतमा महिलाहरुले मात्रै सम्बन्धविच्छेदका लागिमुद्दा दर्ता गराउँदै आएका थिए ।
तर मुलुकी संहिताले पुरुषलाईसमेत सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने अधिकार दिएपछि अचेल डिभोर्सका लागि अदालतमा धाउने पुरुषको संख्या नै धेरै पाइएको हो । गतवर्ष जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका एक सय ४९ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । तर चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनमै दुईसय २१ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
यी मध्ये ५९ वटा मुद्दा पुरुषले दर्ता गराएका हुन् । अधिकांश पुरुषले आफ्नो श्रीमती सम्पर्कमा नआएको, विदेशबाट पठाएको पैसा अपचलन गरेको, अर्कैसँग हिँडेको र अवैध सम्वन्ध राखेकोजस्ता आरोप लगाएर डिभोर्स माग्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न थालेका छन् । यस्तै महिलाले पनि हिंसा गरेको, मदिरा सेवन गरेर दुख दिएको र अर्कै महिलासँग सम्बन्ध बढाएको आरोप लगाउँदै डिभोर्स गर्ने गरेका हुन् ।
पुरुषहिंसाका मुद्दा पनि दर्ता
अदालतमा पुरुषले पनि आफू हिंसामा परेको भन्दै मुद्दा दर्ता गराउन थालेका छन् । चाल आर्थिक वर्षमा अदालतमा दर्ता भएका कुल ३४ मुद्दामध्ये पुरुषहिंसाका नौ र महिलाहिंसाका २५ मुद्दा छन् । मुलुकी संहिता लागू भएपछि जवर्जस्ती करणिका मुद्दाहरु बढेका छन् ।
अदालतमा गत आर्थिक वर्षदेखी हालसम्म पुरुषहिंसाका ८४ वटा मुद्दा दर्ता भएका हुन् । यी मध्ये ४१ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् । अदालतका अनुसार अझैं ४३ वटा बाँकी छन् । यस्तै लागुऔषधका ४३ मुद्दामध्ये २६ मुद्दा फछ्र्यौट गरिएको अदालतले जनाएको छ । यस्तै अदालतले आत्महत्या दुरुत्साहनका तीन, सवारी ज्यान र कर्तव्य ज्यानका आठ÷आठ, बहुविवाहका १३ र बालविबाहका सात वटा मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ ।
डिभोर्सले अपराध बढाउँछ
न्यायाधीश, सुर्खेत जिल्ल अदालत
अदालतमा आइरहेको मुद्दामध्ये डरलाग्दो तथ्याङ्क सम्बन्धविच्छेदको छ । सम्बन्धविच्छेदका कारण समाजमा अपराध बढिरहेको छ । सन्तान भएका जोडीले नै सम्बन् विच्छेद बढी गर्छन् । सन्तान आमा वा बाबुले नै पाल्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर डिभोर्सपछि आमा वा बुवाले अर्को बिहे गर्ने र बच्चाले आमा बुवाको माया नपाउँदा बालबालिकाहरु अपराधतिर उन्मुख हुन्छन् । रुखो बोल्ने, ड्रग्स सेवन गर्ने, बलात्कार, चोरी जस्ता विभिन्न अपराधमा उनीहरुको संलग्नता हुन्छ । सम्बन्धविच्छेदले जोडीलाई शुरुमा फाइदा त होला । तर तिनबाट जन्मिएका बालबालिकामा ठूलो समस्या परिरहेका कयौं घटना छन् ।
यसले समाजलाई ठूलो असरपर्छ । बहुविवाह, जवर्जस्तीकरणी जस्ता मुद्दामा होस्टायल धेरै हुन्छन् । पीडितले होस्टायल गर्दा समाजमा अपराधी झन् खुलेआम हिँडिरहेको हामीले पाएका छौं । अनुसन्धान प्रहरीले गर्ने तर त्यो अनुसन्धान अनुसार बकपत्र गराउँदा पीडित भनिएको व्यक्ति अदालतमा आउँदा बयान फेर्ने प्रवुत्ति बढ्दो छ । समाजले छिटोभन्दा छिटो मुद्दाको टुंगो लागोस् भन्ने चाहन्छ । हाम्रो ध्यान पनि निर्दोषले न्याय पाहोस् भन्नेमा नै केन्द्रीत हुन्छ ।
चार भारतीय नागरिक फरार
अदालतले मुद्दा फैसला गरिसकेका चार जना भारतीय नागरिक अझै फरार छन् । धरौटीमा रिहा भएका उनीहरु अदालतको अन्तिम फैसला हुँदा उपस्थित नभएरै फरार भएका हुन् । यस्तै कैद जरिवाना लागेका एक हजार ४० र कैद मात्रै लागेका दुईसय सात जना अँझै फरारको सुचिमा छन् ।
यस्तै जरिवानातर्फ चार सय ५१ जना फरार सुचिमा छन् । अदालतमा फैसला भइसकेका दुई सय ९५ निवेदन मध्ये एक सय ६१ मुद्दा फछ्र्यौट भइसकेका छन् । यस्तै अदातलका अनुसार चार करोड ३६ लाख १३ हजार एक सय ९३ पैंसा दण्ड जरिवनाबाट अशुल्न बाँकी छ ।
अदालतले हालसम्म ९८ लाख ७० हजार दुईसय २० रुपैयाँ अशुल गरेको छ । कैद लगततर्फ एक हजार चार सय ६६ वर्ष र नौ महिना साढे १४ दिन कैद भुक्तान मध्ये एकसय ५१ वर्ष १० महिना साढे २१ दिन कैद भुक्तान भएको छ । त्यस्तै एकसय ३४ निवेदन, तीन करोड ३७ लाख ४२ हजार ९७३ दण्ड जरिवाना रकम र एक हजार तीन सय १४ वर्ष, १० महिना २३ दिन कैद भुक्तान हुन बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ ।